Blog | Law & More B.V. | Eindhoven uye Amsterdam
Faira chichemo pamusoro pedare
Izvo zvakakosha kuti uve uye uchengete chivimbo muMatare. Ndokusaka iwe uchigona kuisa chichemo kana iwe uchinzwa kuti dare kana mumwe wevashandi vedare haana kukubata zvakanaka. Iwe unofanirwa kutumira tsamba kubhodhi redare iro. Iwe […]
Mutongo wedare reDunhu reThe Hague mune nyaya yaMilieudefensie inopesana neRoyal Dutch Shell PLC (pano shure: 'RDS') idanho rakakosha mumatare emamiriro ekunze. KuNetherlands, iri idanho rinotevera mushure mekusimbisa kwakasimba kwekutonga kweUrgenda neDare Repamusorosoro, uko nyika […]
Pane zvinhu zvinoverengeka zvekuve nemwana nerubatsiro rweanopa mbeu, sekutsvaga mupi akakodzera kana nzira yekumisikidza. Chimwe chinhu chakakosha mune ino mamiriro hukama hwepamutemo pakati pebato rinoda kuve nepamuviri kuburikidza nekumisikidza, chero vadyidzani, mupi wembeu […]
Kana iwe uri kuronga kuendesa kambani kune mumwe munhu kana kutora kambani yemumwe munhu, unogona kushamisika kana kutora uku kuchishandawo kune vashandi. Zvichienderana nechikonzero nei iyo kambani inotorwa pamusoro uye kuti kutora kwacho kunoitwa sei, izvi zvinogona kana zvinogona […]
Kodzero yemidziyo yevaridzi iripo kuchengetedza zvisikwa zvako nemifungo kubva pakushandiswa zvisina mvumo nevechitatu. Nekudaro, mune dzimwe nguva, semuenzaniso kana iwe uchida kuti zvisikwa zvako zvishandiswe mukutengesa, ungangoda kuti vamwe vagone kuzvishandisa. Asi iwe unoda kupa kodzero yakadii […]
Basa reSupervisory Board munguva dzenjodzi
Pamusoro pechinyorwa chedu chikuru pa Supervisory Board (pano 'SB'), tinoda zvakare kutarisa nezve basa reSB munguva dzenjodzi. Munguva dzenjodzi, kuchengetedza kuenderera kwekambani kwakakosha kupfuura nakare kose, zvekuti zvakakosha zvinofanirwa kuitwa. […]
Iyo Supervisory Board
Iyo Supervisory Board (pano inonzi 'SB') iboka reBV neNV iro rine basa rekutarisira pane mutemo webhodhi revatungamiriri uye nenyaya dzese dzekambani nemubatanidzwa wayo (Chinyorwa 2: 140/250 ndima 2 yeDutch Civil Code ('DCC')). Chinangwa che […]
Iyo ins uye kunze kwekambani yepamutemo-tier kambani
Iyo yemutemo mbiri-tier kambani inzira yakasarudzika yekambani inogona kunyorera kuNV neBV (pamwe nemubatanidzwa). Izvo zvinowanzofungidzirwa kuti izvi zvinongoshanda chete kumapoka epasi rese anoshanda nechikamu chezviitiko zvavo muNetherlands. Zvisinei, izvi hazvireve kuti zvinofanirwa kuti […]
Kudzivirira kuchengetwa: zvinotenderwa riini?
Mapurisa akakuchengetedza kwemazuva here uye iwe wave kufunga kuti izvi zvinoitwa zvakanyanya nebhuku here? Semuenzaniso, nekuti unokahadzika kuve kwechokwadi kwezvikonzero zvavo zvekudaro kana nekuti iwe unotenda kuti iyo nguva yaive yakareba kwazvo. Zvakajairika kuti iwe, kana […]
MuNetherlands, kuchengetedza imupiro wemari kumari yekugara yewaimbova mudiwa uye chero vana mushure mekurambana. Imari yaunogamuchira kana yaunofanira kubhadhara pamwedzi. Kana usina mari inokwana kuzviriritira, une kodzero […]
Ndeapi kodzero dzako semaroja?
Muroja wese ane kodzero ane kodzero mbiri dzakakosha: kodzero yekunakidzwa yekurarama uye kodzero yekurendesa dziviriro. Kwatakakurukura nezvekodzero yekutanga yemuroja maererano nezvisungo zvemuridzi wemba, kodzero yechipiri yemuroja yakauya mune rakasiyana blog nezve […]
Kana iwe uchihaya pekugara muNetherlands, unobva waita kodzero yekubhadhara kudzivirirwa. Izvi zvinoshandawo kune vako vaunogara navo uye masisitendi. Pamwechete, kudzivirirwa kwerendi kunosanganisira zvinhu zviviri: kudzivirirwa kwemutengo wekurenda uye kudzivirirwa kwerendi pakurambidzwa kwechibvumirano chevaridzi nepfungwa yekuti muridzi wemba haangakwanise kungo […]
Zvakaoma kusarudza kuti worambana here. Paunenge iwe wafunga kuti iyi ndiyo chete mhinduro, maitiro acho anotanga kunyatso. Zvinhu zvakawanda zvinoda kurongedzwa uye ichavewo nguva yakaoma yemanzwiro. Kukubatsira iwe munzira yako, isu tinopa […]
Kunyorera mvumo yekushanda muNetherlands. Izvi ndizvo zvaunoda iwe semugari weUK.
Kusvikira 31 Zvita 2020, mitemo yese yeEU yanga ichishanda kuUnited Kingdom uye vagari vane nyika yeBritish vanogona kutanga kushanda kumakambani eDutch, kureva, vasina pekugara kana mvumo yekushanda. Zvisinei, apo United Kingdom yakasiya European Union musi waDecember 31, 2020, mamiriro ezvinhu achinja. […]
Zvisungo zvemuridzi wemba
Chibvumirano chekurenda chine akasiyana maficha. Chinhu chakakosha cheizvi muridzi wemba uye zvisungo zvaainazvo kune roja. Pokutangira zvine chekuita nezvisungo zvemuridzi wemba ndiko "kunakidzwa kungatarisirwe nemaroja zvinoenderana nechibvumirano cherendi". Mushure mezvose, zvisungo […]
Chii iwe chaunofanirwa kuita kana iwe usingakwanise kuzadzikisa ako ekumhan'arira zvisungo?
Alimony mugove kune aimbova mukadzi kana vana semupiro mukuchengetedza. Iye munhu anofanirwa kubhadhara alimony anonziwo seye ane chikwereti chekuchengetedza. Iye anogamuchira alimony anowanzo kunzi iye munhu ane kodzero yekuchengetwa. Alimony imari iyo iwe […]
Dhairekita kupokana kwekufarira
Vatungamiriri vekambani vanofanirwa kutungamirirwa nguva dzese nekufarira kwekambani. Ko kana madhairekitori achifanira kutora sarudzo dzinosanganisira zvido zvavo? Ndeupi kufarira uripo uye chii icho director anotarisirwa kuti aite mumamiriro ezvinhu akadaro? Pane kunetsana kwe […]
Chinja mutero wekuchinjisa: vanotanga uye vatengesi vanoteerera!
2021 igore umo zvinhu zvishoma zvichachinja mumunda wemitemo nemirau. Izvi ndozvazviriwo maererano nekutamisa mutero. Musi waNovember 12, 2020, Imba yeVamiririri yakabvumidza bhiri rekugadziriswa kwemutero wekutamisa. Chinangwa cheichi […]
Kuva muridzi ndiyo kodzero yakazara kwazvo inogona kuva nemunhu mune zvakanaka, zvinoenderana neCivil Code. Chekutanga pane zvese, zvinoreva kuti vamwe vanofanirwa kuremekedza muridzi wemunhu iyeye. Nekuda kweiyi kodzero, zviri kumuridzi kuona kuti chii chinoitika kuzvinhu zvake. Zve […]
Kudzokorora kweNV-mutemo uye murume / mukadzi ratio
Muna 2012, mutemo weBV (yakazvimirira kambani) wakarerutswa uye wakagadziridzwa. Nekutanga kushanda kweMutemo pakurerutsa uye kuchinjika kweMutemo weBV, vagovani vakapiwa mukana wekugadzirisa hukama hwavo, kuitira kuti nzvimbo yakawanda igadzirwe kugadzirisa chimiro chekambani […]
Kuchengetedza Zvakavanzika Zvekutengesa: Chii Chaunofanira Kuziva?
Mutemo Wezvakavanzika Zvekutengeserana (Wbb) wakashanda muNetherlands kubvira 2018. Uyu Mutemo unoshandisa iyo European Dhairekitori mukuenzanisira kwemitemo pamusoro pekuchengetedzwa kweasinga zivikanwe ruzivo uye bhizinesi ruzivo. Chinangwa chekuunzwa kweEuropean Directive ndechekudzivirira mutemo kupatsanurwa mune zvese […]
Mukuita, vabereki vakatarisirwa vachiwedzera kusarudza kutanga chirongwa chekuzvimirira kunze kwenyika. Vanogona kunge vaine zvikonzero zvakasiyana siyana zveizvi, zvese izvi zvakabatana nenzvimbo ine njodzi yevabereki vakatarisirwa pasi pemutemo wechiDutch. Izvi zvinokurukurwa muchidimbu pazasi. Muchikamu chino tinotsanangura kuti mikana iri kunze kwenyika inogona […]
Kubata pamuviri, zvinosuwisa, haisiyo nyaya yechokwadi kune wese mubereki ane chishuwo chekuita vana. Pamusoro pekukwanisa kuitiswa, kuberekera mwana pamuviri kungava sarudzo yemubereki anotarisirwa. Parizvino, kuberekera mumwe mwana hakuitwe nemutemo muNetherlands, izvo zvinoita kuti mamiriro epamutemo […]
Kana mwana azvarwa, amai vemwana vanongoerekana vane simba revabereki pamusoro pemwana. Kunze kwezviitiko apo amai vacho pachavo vachiri vadiki panguva iyoyo. Kana amai vakaroorwa nemumwe wavo kana vane hukama hwakanyoreswa panguva yekuzvarwa kwemwana, […]
Bhiri paKuvandudzwa kweKubatana
Kusvika nanhasi, Netherlands ine mafomu matatu epamutemo ehukama: kudyidzana, mubatanidzwa (VOF) uye hushoma hwekudyidzana (CV). Ivo anonyanya kushandiswa mumabhizinesi madiki uye epakati-epakati (maSMEs), chikamu chekurima uye chikamu chebasa. Ese matatu mafomu ehukama akavakirwa pamutemo wekufambidzana […]
Semunhu waunoshandira, unogona kuramba kuudza mushandi wako achirwara?
Zvinowanzoitika kuti vashandirwi vane kusahadzika nezvevashandi vavo vanotaura kurwara kwavo. Semuenzaniso, nekuti mushandi anowanzo kumhan'ara achirwara neMuvhuro kana Chishanu kana nekuti paine kupokana kwemaindasitiri Unobvumidzwa here kubvunza mushumo wehurwere hwemushandi wako uye kumbomira kubhadhara mibairo kudzamara zvawanikwa […]
Chiito chekurega basa
Kurambana kunosanganisira zvakawanda Kufambiswa kwekurambana kunoitwa nematanho akati wandei. Ndeapi matanho anofanirwa kutorwa zvinoenderana nekuti une vana here uye kana iwe wakabvumirana pachine nguva pekugadzirisa newawakaroora wawakaroorana naye. Muzhinji, inotevera nzira yakajairwa inofanirwa kuteverwa. Chekutanga che […]
Zvinogumbura zvikuru kana mirairo yako ikasateedzerwa nemushandi wako. Semuenzaniso, iye mushandi uyo wausingavimbe naye kuti aoneke panzvimbo yebasa mukupera kwevhiki kana iye anofunga kuti kodhi yako yekupfeka yakachena haishande kwaari. […]
Chii chinonzi alimony? MuNetherlands alimony mupiro wemari kumubhadharo wekurarama wewawakanga uchidanana naye uye vana mushure mekurambana. Imari yaunogamuchira kana yaunofanira kubhadhara pamwedzi Kana iwe usina mari yakakwana yekurarama, unogona kuwana alimony. […]
Kana kukakavadzana kwakamuka mukati mekambani yako isingakwanise kugadziriswa mukati, maitiro pamberi peI Enterprise Chamber inogona kunge iri nzira yakakodzera yekugadzirisa. Maitiro akadaro anonzi ongororo. Mune maitiro aya, Enterprise Chamber inobvunzwa kuti iongorore mutemo uye mafambiro ezvinhu…
Munguva yekuyedza, mushandirwi nemushandi vanogona kusvika pakuzivana. Mushandi anogona kuona kana basa nekambani zvaari kumufarira, nepo mushandirwi achiona kana mushandi akakodzera basa racho. Nehurombo, izvi zvinogona kutungamira mukudzingwa kwemushandi. […]
Iwe unoda here kubvisa chibvumirano? Izvo hazvingagone kuitika ipapo ipapo. Ehezve, zvakakosha kuti kana paine chibvumirano chakanyorwa uye kana zvibvumirano zvakaitwa nezve nguva yekuzivisa. Dzimwe nguva nguva yekucherechedza yepamutemo inoshanda pachibvumirano, iwe pachako uine […]